Matambiro 8 epasi kufambisa mafupa | Absolut Kufamba
Alberto Makumbo | | Argentina, Brasil, Caribbean, España, India, Russia, Uruguay
Inonzwisiswa semutauro wehunyanzvi sewemuno sezvauri wepasirese, kutamba kunozvitaurira pamusoro pezvikamu zvakasiyana zvepasi zvichienderana neruvara, maitiro kana ngano dzinozvikurudzira. Izvi Mitambo mitanhatu yenyika ivo ndivo muenzaniso wakanakisa wepasi rakasiyana-siyana sezvo richinakidza.
Rimwe zuva muna 1602, miko, kana mushandi weimwe tembere yeJapan inonzi Izumo no Okuni akatanga kudzidzira mhando yekutamba kunoshamisa padyo neRwizi rweKyoto maakaronga mamiriro akasiyana ehupenyu hwezuva nezuva hwevakadzi venzvimbo iyi. Mazana emakore gare gare, kabuki, vane mavara avo anoreva kuimba, kutamba uye hunyanzvi, gadzira imwe yeanonyanya kufarira marudzi ekutamba pasirese. Imwe nzira inoshandiswa kune japanese theatre imomo vatambi, vakaputira mumakeup uye vakapfeka zvipfeko zvinodhura, vanodudzira nyaya dzakakamurwa kuva enhoroondo, epamba uye emitambo yekutamba inoitika munyika yese. Iyo kabuki pachayo yaive yakasarudzwa Intangible Heritage yeHumanity neUNESCO muna 2008.
Kunyangwe akazvarwa muFrance makore mazhinji zvisati zvaitika, Ballet yeRussia yakasvika mukutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri kuti idzokezve doldrums mhando. Yakafungidzirwa seyakawedzera hunyanzvi uye inoitika maitiro, iyo ballet yeRussia yakasimudzirwa namuzvinabhizinesi weRussia Sergey Diaghilev yakavakirwa pane dzakasiyana nyaya dzenyika ngano (Iyo Firebird kana Swan Lake mimwe mimwe mienzaniso), kuwedzera kune zvidimbu zvemimhanzi zvakanyorwa nevanyori maRussia kuti vaperekedze mamiriro akaratidzirwa nemitauro yemuviri umo mutambi anofanira kudzidziswa kubva pazera diki. Kusiyana neFrance, iyo simba uye simba reRussia ballet Rudzi urwu rwekutamba rwakawedzera, ruchiva chinhu chinoshamisa kwese kwasvika nzendo, kubva kuSpain kuenda kunyika dzeEastern Europe.
Yakagamuchirwa se mhedzisiro yesimba rakasimba rekutama, vese veEuropean ne Africa, uye nemazvo Latin America, tango akaberekerwa mudunhu reArgentina reRío de la Plata pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX kuti abatanidze pakutanga kweXNUMX. Kutamba kwenyama uko vaviri vadikani vanomutsa mutauro unofadza uye unoshamisa nepo mimhanzi ichivatungamira, maziso anoita rudo uye rose rinorembera mumuromo. Pasina mubvunzo, imwe yeanonyanyo kuoneka mitambo yekutamba muLatin America uye mumwe wevanotengesa kunze kwenyika tsika dzenyika yeArgentina iyo yakasvinura chikamu chakakwirira chemarudzi mazhinji kuburikidza nemabhawa etango. Pasina kupokana, imwe yematanho ane mukurumbira pasi rese.
Zvinotendwa kuti iyo "perreo" kana "kukuya", pfungwa dzakabatana neiyo yepasi rose "twerking", akaberekwa mukupera kwema90s muPuerto Rico kupedzisa kutapurira mamwe maCaribbean uye kuenda kuhutachiona pasirese. Kutamba kwepanyama mune imwe yenhengo inoteedzera kumira kwembwa panguva yekusangana, kukotama pasi nekukomberedza chiuno ane kusvika kwetsika dzakakurumbira kwakaitika mugore ra2013 mushure mekuita kwemuimbi Miley Cyrus kuMTV Video Music Awards. Inherent kune iyo inopisa uye kunyanya tsika yechitsuwa yeAmerica, twerking rudzi rwekutamba sekukakavara sezvazviri kwese.
Kana zvasvika pakunzwisisa kutamba, Africa iri kubuda sekondinendi kubva kwayakasiyana masitayera uye marudzi kubva pasirese epasi achitenda nehukuru hwakawanda hwetsika nemagariro anozvigadzira. Mumwe wemuenzaniso wakanaka ndewe kutamba kweagbadza kwerudzi rweEwe rweGhana, kunyange hazvo ichizivikanwawo muTogo neBenin. Dzokororo pamariro, michato nemhemberero dzakadai seHogbetsotso Festival, agbadza rinozivikanwa se "Dhanzi yehuku", sezvo ichifananidza kufamba kweshiri yekutamba iyo, kusiyana nemamwe madhizaini eGhana, isingasaradzi chero munhu anotora chikamu zvichienderana nehunhu hwavo, zera kana chitendero.
Nziyo dzemuAfrica nekukweva kwadzo, sezvatakambotaura munongedzo yapfuura, zvakakonzera mimhanzi nekutamba mhando senge samba. Chiratidzo chetsika yeBrazil iyo inoda ruvara uye pati, samba inouya kubva kumatambiro akasiyana anoitwa nevaranda vemuAfrica vakaunzwa kuBrazil uye kuti mushure mekubviswa kwejoko ravo vaive ivo mutariri wekusimudzira muRio de Janeiro hofori. Kunyange paine akati wandei masitaera, samba akaberekerwa muBahia anoonekwa nekushandiswa kwezviridzwa zveCongo, zvirevo zvemimhanzi uye kutamba uko kuzunza chiuno kunotungamira kupfuura muviri wese kupa mutero kuupenyu nemweya yeavo vakapotera mumimhanzi mazana emakore apfuura munguva yerwendo rwavo rwekuyambuka nyika.
Kana iwe ukashanyira tropical state ye KeralaMuSouth India, iwe unogona kuzviwana uine skintight vatambi vakapfeka masutu akashongedzwa uye pasi pechikamu chekupoda kubva maawa ebasa. Idzi ndidzo nhengo huru dzekathakali, mhando yekutamba kwechinyakare kubva kuSouth India umo vatambi nevatambi vanoita dzakasiyana ngano dzechinyakare nekungovimba nematanho ekutamba, kumeso kwechiso kana mudras inozivikanwa., mhando yechiratidzo chemaoko chakajairika cheiyo subcontinent. Dhanzi mune kutonga kwakazara kwemuviri nemasaini ayo zvinokunda kana zvasvika pakukurudzira manzwiro kana manzwiro pasina kusiya yakanakisa nhoroondo yekudziya.
Samba, kathakali, hongu, asi ko zvakadiniko neflamenco? Chimiro chakaumbwa ne hodgepodge yetsika idzo dzakamera muAndalusia pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX uye yainyanya kukurudzirwa nerudzi rwechiGypsy, flamenco inosanganisira chimiro chemimhanzi inoitwa kuburikidza nekutamba kunoyerera pakati pemichindwe, mutinhimira wegitare nekante. Mitezo inoratidzirwa kuburikidza neyakareruka uye emafambiro mafambiro anoita madanho akasiyana akatorwa senge mufaro, iyo bulería kana iyo soleá. Pasina mubvunzo, imwe yematanho ane mukurumbira pasi rose, ayo makuru ekuratidzira epasirese uye nemhedzisiro yakauya kuzoburitsa izvo zvinozivikanwa se "flamenco therapy."
Neipi yemitambo iyi yepasi iwe yaunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Mitambo mitanhatu yenyika